Remubatanidzwa Fertilizer Mukudhinda Line - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Tine ruzivo rwakazara mukomboni fotereza yekugadzira mutsara. Isu hatisi kungo tarisa pane yega yega maitiro ekubatanidza mune yekugadzira maitiro, asi zvakare gara uchinzwisisa maitiro enzira yeumwe neumwe mutsara wekugadzira uye mushe mushe kuwana interlinking. Isu tinopa akagadziriswa ekugadzira mitsara mhinduro zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi.
Iyo yakazara yekugadzira maitiro ndeimwe yemabhenefiti makuru ekushandira pamwe kwako neYuzheng Heavy Maindasitiri. Isu tinopa maitiro dhizaini uye kugadzira kweiyo yakazara seti yedhiramu granulation yekugadzira mitsara.
Fetereza yakaoma Complex fetiraiza ine nitrogen, phosphorus uye potasium, inosanganiswa zvichienderana nechimwe chikamu che fetiraiza imwechete uye inogadzirwa nemakemikari maitiro. Izvo zvinovaka muviri zvine yunifomu uye saizi yezvimedu yakafanana. Ikomboni fotereza yekugadzira tambo ine yakafara kuchinjika kune iyo granulation yezvakasiyana komputa fetiraiza mbichana.
Ikomboni fotereza yekugadzira mutsetse wakagadzirwa neyakajairika chinhu, maviri-axis blender, nyowani yemubatanidzwa fetiraiza granulator, yakatwasuka cheni crusher, dhiramu yekuomesa inotonhorera, dhiramu nesefa muchina, unhani muchina, guruva muteresi, otomatiki kurongedza muchina uye zvimwe zvekubatsira michina.
Seunyanzvi hwekugadzira fetereza yekugadzira tambo michina, isu tinopa vatengi nemakambani ekugadzira nematoni zviuru gumi pagore kusvika kumatani mazana maviri ezviuru pagore.
1. Iyo granulation mwero yakakwira se70% neyemberi dhiramu granulation muchina.
2. Izvo zvakakosha zvinhu zvinotora zvinhu zvinopfeka kusapfeka uye zvisingagadzike, uye iyo michina ine hupenyu hwakareba hwebasa.
3. Rotary dhiramu granulator yakarongedzwa nesilicone kana isina simbi mahwendefa, uye izvo zvinhu hazvisi nyore kunamatira kumadziro emukati emuchina.
4. Kugadzikana mashandiro, nyore kugadzirisa, kushanda kwakanyanya uye kuderera kwesimba kushandiswa.
5. Shandisa bhandi rinotakura kuti ubatanidze mutsetse wekugadzira wese kuti uwane kugadzirwa kuri kuenderera.
6. Shandisa maviri seti emakamuri ekubvisa guruva kurapa muswe gasi kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
7. Kupatsanurwa kwebasa remasefa maviri kunovimbisa kuti saizi yezvikamu yakafanana uye mhando yacho inokodzera.
8.Yunifomu kusanganisa, kuomesa, kutonhora, kupfeka uye mamwe maitiro anoita kuti chigadzirwa chakapedzwa chikure muhunhu.
Maitiro kuyerera kwekomboni fetiraiza yekugadzira mutsara: mbishi zvinhu zvekushandisa → mbishi yekuvhenganisa → granulation → kuomesa → kutonhodza → yakapedza chigadzirwa kuongorora → epurasitiki chidimbu kupatsanurwa → kupfeka → kupedzisa chigadzirwa kurongedza → kuchengetedza. Ongorora: iyi tambo yekugadzira ndeye yekureva chete.
Mbishi zvinhu zvinoshandiswa:
Zvinoenderana nezvinodiwa pamusika uye mhedzisiro yevhu yemuno mhedzisiro, urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium thiophosphate, ammonium phosphate, diammonium phosphate, heavy calcium, potasium chloride (potassium sulphate) uye zvimwe zvinhu zvakasvibirira zvinogoverwa mune chimwe chikamu. Additives, trace element, nezvimwewo zvinoshandiswa sezvinhu zvinosanganiswa mune chimwe chikamu kuburikidza nezviyero zvebhandi. Zvinoenderana neiyo muyero wefomula, zvese zvakasvibirira zvinhu zvinosanganiswa zvakaenzana kubva pamabhanhire kuenda kuvasanganisi, maitiro anonzi premixes. Iyo inovimbisa kurongeka kwekuumbwa uye inowana inoshanda inoenderera zvigadzirwa.
Izvo zvinhu mushure mekusanganisa uye kupwanya zvakaenzana zvinotakurwa kubva kubhandi rekutakura kuenda kune itsva komputa fetiraiza granulator. Nekutenderera kutenderera kwedhiramu, izvo zvinhu zvinoumba kutenderera kufamba munzira yakati. Pasi pekunetseka kwekuwedzera, chinhu chacho chinosanganiswazve kuita zvidimbu zvidiki uye zvakanamatira paupfu hwakakomberedza kuti zvishoma nezvishoma zviumbe chimiro chakakora chechitenderedzwa. Granules.
Iyo granulation zvinhu inoda kuomeswa isati yagona kusangana nezvinodiwa zvehunhu hunyoro zvemukati. Kana iyo yakaoma ichitenderera, iyo yekumusoro yekusimudza ndiro inoenderera ichisimudza uye ichikanda iyo yekuumba zvimedu, kuitira kuti izvo zvinhu zvinyatso kusangana nemhepo inopisa kuti ibvise iwo hunyoro kubva pairi, kuti uwane chinangwa cheyunifomu kuomesa. Iyo inotora yakazvimiririra yemhepo yekuchenesa system kune yepakati kuburitsa yekuzadza magasi uye chengetedza simba uye kudzikisa kushandiswa.
4. Granule kutonhora:
Mushure mokunge zvinhu zvacho zvaomeswa, zvinofanirwa kutumirwa kune inotonhorera kuti itonhorere. Iyo inotonhorera inosunganidzwa nebhandi rinotakura kune rakaomesa. Iko kutonhora kunogona kubvisa guruva, kunatsiridza kutonhodza kushanda uye kupisa kwemagetsi, uyezve kubvisa mwando kubva kune izvo zvikamu.
Mushure mekudzikama kwemidziyo yezvinhu, ese akanaka uye makuru zvidimbu zvinovhenekerwa kuburikidza ne roller roller. Izvo zvisina kukodzera zvigadzirwa zvakasvinudzwa kubva kubhandi rekutakura kuenda kune blender zvinomutswa uye kuwedzerwa granulated pamwe neyakagadzirwa zvigadzirwa zvakare. Chigadzirwa chakapedzwa chichaendeswa kune mukomboni fotereza yekupfeka muchina.
Inonyanya kushandiswa kuisa yunifomu inodzivirira firimu kumeso kwequasi-apedza zvidimbu kuti unyatsogadzirisa hupenyu hwesherufu hwezvimedu uye kuita kuti zvidimbu zvitsvedzerere. Mushure mekupfekedza, ndicho chekupedzisira chinongedzo mune yese nzira yekugadzira - kurongedza
Maitiro aya anotora otomatiki huwandu hwekupakata muchina. Muchina uyu unogadzirwa nemuchina wekuyera wega, wekutakura system, wekuisa chisimbiso, nezvimwe. Unogona zvakare kugadzirisa hoppers zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Inogona kuona kuwanda kwekuputira zvinhu zvakawandisa senge organic fetiraiza uye komputa fetiraiza.